Fanontaniana napetraka matetika | Visa an-tserasera India
India e-Visa - Fanontaniana napetraka matetika
Inona no atao eVisa India?
Ny Governemanta Indiana nanangana Electronic Travel Authority (ETA na eVisa an-tserasera) tamin'ny taona 2014. Mamela ny olom-pirenena avy amin'ny firenena manodidina ny 180 handeha hamonjy any India nefa tsy mila fanisiana tombo-kase ara-batana amin'ny pasipaoro. Ity karazana fahazoan-dàlana vaovao ity dia ny e-Visa India (na ny Online India Visa).
Izy io dia visa any India elektronika izay mamela ny mpandeha na ny mpitsidika vahiny hitsidika an'i India amin'ny tanjon'ny fizahan-tany toy ny fialamboly na yoga / fampianarana fohy, orinasa na fitsidihana ara-pitsaboana.
Ny teratany vahiny rehetra dia tsy maintsy mitazona e-Visa ho an'i India na visa tsy tapaka alohan'ny hidirany any India araka ny isan'izy ireo Manampahefana an'ny fifindra-monina Indiana.
Tsy voatery hihaona amin'ny masoivohon'i India na consulat amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny mampihatra an-tserasera tsotra fotsiny ary mitondra ny kopian'ny e-Visa India (elektronika India Visa) amin'ny finday. Navoaka manohitra pasipaoro manokana ny e-Visa any India ary ity no hojeren'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina.
India e-Visa dia antontan-taratasy ofisialy mamela ny fidirana sy fitetezana ao India.
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fampiharana e-Visa any India?
Raha te hangataka e-Visa India, ny pasipaoro dia mila manana fe-potoana 6 volana farafahakeliny manomboka amin'ny daty nahatongavana any India, mailaka ary manana carte de crédit/debit manankery. Ny pasipaoronao dia mila manana pejy 2 tsy misy na inona na inona takiana amin'ny fitomboka ataon'ny mpiandraikitra ny fifindra-monina.
Ilay e-Visa mpizaha tany azo ampiasaina in-3 ambony indrindra ao anatin'ny taom-pilalaovana izany hoe eo anelanelan'ny Janoary ka hatramin'ny Desambra.
E-Visa orinasa mamela ny fijanonana maharitra 180 andro - fidirana marobe (manan-kery mandritra ny 1 taona).
Fitsaboana e-Visa mamela ny fijanonana maharitra 60 andro - fidirana 3 (manan-kery mandritra ny 1 taona).
e-Visa tsy azo ovaina, tsy azo ovaina ary tsy manan-kery hitsidika ny faritra arovana / voaferana sy faritra lemaka.
Ny mpangataka ny firenena / faritany mendrika dia tsy maintsy mampihatra ny kely andro 7 andro mialoha ny daty hahatongavany.
Tsy voatery hanana porofo momba ny famandrihana hotely na tapakila sidina ny mpandeha iraisam-pirenena. Na izany aza, ny porofon'ny vola ampy hanohanana ny fijanonanao any India dia manampy.
Rahoviana aho no tokony hisoratra anarana amin'ny e-Visa India?
Tsara ny mampihatra 7 andro mialoha ny datin'ny fahatongavana indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny peak (Oktobra - Martsa). Tsarovy ny kaontinao ny fotoana fizotry ny fifindra-monina mahazatra izay maharitra 4 andro fiasana.
Ataovy ao an-tsaina azafady fa ny fifindra-monina indianina dia mitaky anao hanao fangatahana ao anatin'ny 120 andro ahatongavanao.
Iza no afaka mandefa fangatahana e-Visa India?
Ireo teratany amin'ny firenena manaraka dia mahazo alalana:
Albania, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arzantina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belzika, Belize, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brezila, Brunei, Bulgaria, Burundi, Kambodia Cameron Union Republic, Canada, Cape Verde, Cayman Island, Chile, China, China- SAR Hongkong, China- SAR Macau, Colombia, Comoros, Cook Cook, Costa Rica, Cote d'lvoire, Kroasia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Danemark, Djibouti, Dominica, Repoblika Dominikanina, Timor Atsinanana, Ekoatera, El Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Allemagne, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras , Hongria, Islandy, Indonesia, Iran, Irlandy, Israel, Italia, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaizia, Mali, , Malta, Nosy Marshall, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mon tserrat, Mozambika, Myanmar, Namibia, Nauru, Netherlands, Nouvelle-Zélande, Nikaragoà, Repoblika Niger, Nosy Niue, Norvezy, Oman, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peroa, Filipina, Polonina, Portugal, Qatar, Repoblika avy any Korea, Repoblikan'i Makedonia, Romania, Russia, Rwanda, Saint Christopher ary Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & ny Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nosy Solomon, Afrika atsimo, Espana, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Soeda, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Island, Tuvalu, UAE, Oganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Etazonia, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City-Holy See, Venezoela, Vietnam, Zambia ary Zimbabwe.
Fanamarihana: Raha tsy ao amin'ity lisitra ity ny firenenao dia mila mangataka Visa any India mahazatra any amin'ny Masoivohon'i India akaiky na Consulat ianao.
Mila visa ve ny olom-pirenena anglisy mba handehanana any India?
Eny, ny olom-pirenena britanika dia mitaky visa handehanana any India ary azo ekena amin'ny e-Visa. Na izany aza, ny e-Visa dia tsy misy ho an'ny lohahevitra anglisy, olona voaaro britanika, olom-pirenena britanika ampitan-dranomasina, zom-pirenena britanika (ampitan-dranomasina) na teratany teratany ampitan-dranomasina britanika.
Mila visa ve ny olom-pirenena amerikanina mba hivezivezy any India?
Eny, ny olom-pirenena amerikana dia mitaky visa handehanana any India ary azo ekena amin'ny e-Visa.
Ny e-Visa India dia visa tokana na visa fidirana marobe? Azo itarina ve?
Ny e-turista 30 andro Visa dia fahazoan-dàlana indroa izay toy ny e-Tourist mandritra ny 1 taona sy 5 taona dia visa fidirana maro. Toy izany koa ny visa-e-Business dia visa visa fampidirana marobe.
Na izany aza, visa e-Medical dia visa fidirana telo. Ny eVisas rehetra dia tsy azo ovaina ary tsy azo ovaina.
Nahazo ny e-Visa India-ko aho. Ahoana no fomba hiomanako tsara indrindra amin'ny diako any India?
Ireo mpangataka dia hahazo ny e-Visa India nankatoaviny tamin'ny alàlan'ny mailaka. Ny e-Visa dia antontan-taratasy ofisialy takiana mba hidirana sy hivezivezy ao India.
Ny mpangataka dia tokony hanonta dika mitovy farafahakeliny 1 amin'ny e-Visa India ary hitondra izany miaraka aminy amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fijanonany manontolo any India.
Tsy voatery manana porofo momba ny famandrihana hotely na tapakila sidina ianao. Na izany aza, ny porofon'ny vola ampy hanohanana ny fijanonanao any India dia manampy.
Rehefa tonga any amin'ny 1 amin'ireo seranam-piaramanidina 28 nahazoana alalana na seranan-tsambo 5 voatondro, ny mpangataka dia tsy maintsy mampiseho ny e-Visa India vita pirinty.
Raha vantany vao manamarina ny e-Visa ny manampahefana misahana ny fifindra-monina, dia hametraka sticker iray ao amin'ny pasipaoro, antsoina koa hoe, Visa amin'ny fahatongavany ny manamboninahitra. Ny pasipaoronao dia mila manana pejy 2 tsy misy na inona na inona takiana amin'ny fitomboka ataon'ny mpiandraikitra ny fifindra-monina.
Mariho fa ny Visa on Arrival dia tsy misy afa-tsy ho an'ireo izay nangataka sy nahazo eVisa India taloha.
Mety ve ny e-Visa India amin'ny fidiran'ny sambo fitsangantsanganana?
Eny. Na izany aza, ny sambo fitsangantsanganana dia tsy maintsy miantsona amin'ny seranan-tsambo eken'ny Visa. Seranam-piaramanidina nahazo alalana dia: Chennai, Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai.
Raha mandeha sambo fitsangantsanganana any amin'ny seranan-tsambo hafa ianao, dia tsy maintsy asiana tombo-kase visa mahazatra ao anaty pasipaoro.
Inona avy ireo fameperana rehefa miditra any India miaraka amin'ny e-Visa India?
e-Visa India dia mamela ny fidirana ao India amin'ny alàlan'ny iray amin'ireto seranam-piaramanidina 28 nahazo alalana sy seranan-tsambo 5 nahazo lalana any India ireto
Lisitry ny seranam-piaramanidina fiaramanidina faha-28 sy sambo 5 any India:
Na ireto seranan-tsambo nahazo alalana ireto:
Ireo rehetra miditra ao India miaraka amin'ny e-Visa dia tsy maintsy tonga any amin'ny 1 amin'ireo seranam-piaramanidina na seranan-tsambo voalaza etsy ambony. Raha manandrana miditra any India ianao miaraka amin'ny e-Visa India amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina na seranan-tsambo hafa, dia tsy mahazo miditra ao amin'ny firenena ianao.
Inona avy ireo fetra rehefa miala any India amin'ny e-Visa India?
Ireto ambany ireto dia teboka fanamarinana fifindra-monina (ICPs) nahazoana alalana hivoaka an'i India. ( Seranam-piaramanidina 34, Toeram-pijerena ny fifindra-monina amin'ny tany, seranan-tsambo 31, Toerana fisavana lalamby 5). Ny fidirana ao India amin'ny Visa elektronika India (Indian e-Visa) dia mbola avela amin'ny fitaterana 2 ihany - seranam-piaramanidina na amin'ny sambo sambo.
Seranam-piaramanidina voatondro ho an'ny fivoahana
Seranan-tsambo voatondro ho an'ny fivoahana
Seranan-tsambo any Mumbai
Agati sy Nosy Minicoy Lakshdwip UT
Teboka fanamarinana ny fifindra-monina
Torohevitra momba ny fifindra-monina momba ny fifindra-monina
Paositra fanamarinana an'i Munabao
Gede Rail sy Post Check Post
Paositra manara-maso Haridaspur
Paositra Chitpur Rail Checkost
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiharana an-tserasera amin'ny e-Visa India vs Visa Indiana mahazatra?
Ny fangatahana e-Visa an-tserasera (e-Tourist, e-Business, e-Medical, e-MedicalAttendand) ho an'i India dia manana tombony maro. Azonao atao ny mameno ny fampiharana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fampiononana ao an-tranonao ary tsy mila mitsidika ny Masoivoho Indiana na consulat. Ny ankamaroan'ny fangatahana e-Visa dia ekena ao anatin'ny 24-72 ora ary alefa amin'ny mailaka. Takiana aminao ny fananana pasipaoro, mailaka ary carte de crédit / debit.
Na izany aza, rehefa mangataka Visa any India mahazatra ianao, dia takiana aminao ny handefa ny pasipaoro tany am-boalohany miaraka amin'ny fangatahana visa, ny fanambarana ara-bola sy ny fonenana hipetrahanao, mba hankatoavana ny visa. Ny fizotry ny fampiharana visa mahazatra dia sarotra kokoa ary sarotra kokoa, ary koa manana taha ambony kokoa amin'ny fandavana visa.
Ka ny e-Visa India dia sady haingana no tsotra kokoa noho ny Visa Indianina mahazatra
Inona no Visa amin'ny Fahatongavany?
Ny zom-pirenen'i Japon, Korea atsimo ary Emirà Arabo Mitambatra (ho an'ireo teratany UAE toy izany izay nahazo visa e-Visa na visa ara-dalàna / ara-dalàna ho an'i India) dia mendrika alefa amin'ny Visa-on-Arrival
Inona avy ireo endrika fandoavam-bola azo alaina ho an'ny e-Visa any India?
Ny carte de crédit lehibe rehetra (Visa, MasterCard, Union Pay, American Express ary Discover) dia ekena. Azonao atao ny mandoa vola amin'ny iray amin'ireo vola 130 sy fomba fandoavam-bola ao anatin'izany ny Debit / Credit / Check / Paypal. Ny fifanakalozana rehetra dia azo antoka amin'ny alàlan'ny serivisy mpivarotra azo antoka PayPal.
Mariho fa ny tapakila dia alefan'ny PayPal amin'ny id mailaka nomena tamin'ny fotoana nandoavana.
Raha hitanao fa tsy mahazo fankatoavana ny fandoavanao vola any India e-Visa, ny antony mety lehibe indrindra dia ilay olana hoe manakana ity fifanakalozana iraisam-pirenena ity ny orinasa banky / carte de crédit / debit anao. Antsoy tsara ny nomeraon-telefaona ao ambadiky ny karanao, ary andramo ny manandrana mandoa vola indray, izany dia mamaha ny olana amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Alefaso mailaka izahay amin'ny info@evisa-india.org.in raha mbola tsy voavaha ny olana ary ny 1 amin'ny mpiasan'ny mpanjifanay dia hifandray aminao.
Mila vaksiny aho raha mandeha any India?
Zahao ny lisitry ny vaksinina sy ny fanafody ary zahao ny dokotera farafahakeliny iray volana alohan'ny dianao hahazoana vaksinina na fanafody mety ilainao.
Ny ankamaroan'ny mpandeha dia asaina manao vaksiny:
Ny tazo typhoid
Ilaina ve ny hanana karatra vaksiny mavo amin'ny fahazoana mivoaka ao India?
Ireo mpitsidika izay avy amin'ny firenena misy fiantraikany amin'ny Yellow Fever dia tsy maintsy mitondra karatra fanaovam-baksary Yellow Fever rehefa mandeha any India:
Trinidad (Trinidad irery)
Important Note: Raha efa nankany amin'ny firenena etsy ambony voalaza etsy ambony ianao, dia takiana aminao ny hanolotra karatra fanaovam-baksiny Yellow Fever rehefa tonga ianao. Ny tsy fanarahana izany dia mety hiteraka karokantin mandritra ny 6 andro rehefa tonga any India.
Mila Visa ve ny Ankizy na ny tsy ampy taona hitsidihana an'i India?
Eny, ny mpandeha rehetra anisan'izany ny ankizy/tsy ampy taona dia tsy maintsy manana -visa manan-kery handehanana any India. Ataovy azo antoka fa manankery ny pasipaoron'ny zanakao, fara fahakeliny, mandritra ny 6 volana manaraka manomboka amin'ny vaninandro tonga any India.
Azontsika atao ve ny mizotra amin'ny mpianatra eVisas?
Ny governemantan'i India dia manome ny eVisa India ho an'ireo mpandeha izay manana tanjona tokana toa ny fizahan-tany, fikarakarana fohy fotoana fohy na fitsangatsanganana ara-barotra.
Manana Passport diplaomaty aho, azoko atao ve ny mangataka ny eVisa Indiana?
India e-Visa dia tsy misy amin'ireo tompona antontan-taratasy fizahan-tany Laissez-passer na Tompon'ny pasipaoro diplomaty / ofisialy. Tsy maintsy mangataka Visa ara-dalàna ao amin'ny masoivohon'i India ianao.
Ahoana raha nanao hadisoana tamin'ny fangatahako e-Visa India aho?
Raha sendra diso ny fampahalalana nomena nandritra ny fizotry ny fangatahana e-Visa India dia takiana amin'ireo mpangataka ny fangatahana fangatahana fangatahana fangatahana visa vaovao ho an'ny Internet any India. Hofoanana ho azy ny fampiharana eVisa India taloha.